စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 20/11/2020)
အကယ်၍ သင်ကောင်းစွာအစီအစဉ်ဆွဲလျှင်ဥရောပရှိမိသားစုအားလပ်ရက်အားလပ်ရက်များသည်မိဘများနှင့်အသက်အရွယ်မရွေးကလေးများအတွက်အလွန်ပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်. ဥရောပသည်ရဲတိုက်နှင့်တံတားများ၏မြေဖြစ်သည်, စိမ်းလန်းစိုပြေသောပန်းခြံများနှင့်မိန်းကလေးငယ်များနှင့်ယောက်ျားလေးများသည်တစ်နေ့တာအတွက်မင်းသမီးနှင့်မင်းသားများအဖြစ်ဟန်ဆောင်နိုင်သည်. ရှိပါတယ် ကြီးစွာသောတောင်တက်လမ်းကြောင်း ကြီးစွာသောပြင်ပမှာစွန့်စားမှုအဘို့အစက်အပြောက်အများကြီး, ဒါပေမယ့်ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွားလာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်.
မိသားစုအားလပ်ရက်ကြီးတစ်ခု၏လျှို့ဝှက်ချက်မှာမိသားစုတစ်ခုလုံးသည်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအခါဖြစ်သည်. ဥရောပဟာအံ့ land စရာကောင်းတဲ့အထင်ကရနေရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်, ဆွဲဆောင်မှု, အပန်းဖြေပန်းခြံများ, နှင့်လည်ပတ်ရန်နေရာများ, နှင့်သင်၏ကလေးများကိုဥရောပသို့သွားရန်စီစဉ်ခြင်းတွင်အိပ်မက်အားလပ်ရက်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်. သင်၏သုတေသနကိုကြိုတင်ပြုလုပ်ပါ, သင်လည်ပတ်လိုသည့်ဆွဲဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်ပါ, နှင့်သင်၏ကလေးတွေကိုချစ်မယ်လို့အစက်အပြောက်, ပြီးတော့ကလေးတွေရွေးပါ 3-4 စာရင်းအပေါ်ဆွဲဆောင်မှု. ဤနည်းအားဖြင့်လူတိုင်းပျော်ရွှင်။ နေ့စဉ်မျှော်လင့်ရန်တစ်ခုခုရှိသည်.
ဥရောပမြို့ကြီးအများစုတွင်အဓိကမြို့တော်ရင်ပြင်၌တောက်ပ။ လှပသောသွင်ပြင်များရှိသည်. လာမယ့် site ကိုမှပြေး၏, ရပ်, နှင့် kiddos သူတို့လိုချင်သလောက်စီးနင်းအပေါ်ဆက်လက်ခွင့်ပြုပါ. Eiffel Tower သည်သင့်နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည့်အခါ carousel စီးနင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သည်, ကလေးငယ်များနှင့်အရွယ်ရောက်သူများအတွက်အမှတ်ရစရာအခိုက်အတန့်တစ်ခုဖြစ်သည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ဥရောပတွင်မိသားစုအားလပ်ရက်အတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်များ (၁၀) ချက်” ကိုသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ထည့်သွင်းလိုပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/tips-family-vacation-europe/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)